DHAMMAAN WAXYAALAHA UGU MUHIIMSAN EE KU SAABSAN LO'DA TARANTA ABERDEEN-ANGUS JILICSAN - XOOLAHA
Waa arrin aad u qosol badan, laakiin sababo naga darteen waxaanu caadeysnaa inaan kala saarno lo'da aan ahayn midab, laakiin midab. Dabcan, uurjiifka khibrad leh, rafcaanku wuxuu ka hadli karaa waxyaabo badan, laakiin jacaylka jilayaasha ma noqon doono shuruud lagu qiimeeyo waxqabadka lo'da.
Sidaa daraadeed, waa in la ogaadaa xayawaankan quruxda badani waa inuu ka bilaabmaa waxa uu jilicsan yahay, iyo ka dib barashada dhamaan sifooyinka caleenta, si uu uga soo baxo gabagabada ku saabsan sifooyinka xayawaan gaar ah.
Sidaa darteed, haddii aad u baahnayd inaad ku daboosho lo'da Aberdeen-Angus, waxaan ku faraxsanahay inaan kuu sheegno waxa faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka ay leedahay, iyo sida waxsoosaarku u noqon karo xaaladaha guriga lagu hayo.
Waxaan wadaagnaa taariikhda asalka iyo astaamaha ee lo'da Aberdeen-Angus
Xayawaanka Tani waxay muddo dheer ka dhigan tahay dhaqanka taranka beeraha ee dalkooda - Ingiriisi Scotland. Hase yeeshee, maaha mid aad u yar oo ku baahsan dhulalka wadamada kale iyo qaaradaha.
Caan-celinta noocan oo kale ah ayaa u qalantaa, tan iyo jihada ugu muhiimsan ee tarankan lo'da waa hilibka lo'da, inkastoo ay suurtagal tahay in la helo caano yar. Iyadoo taas la mid ah, Aberdeen-Angus waa mid ka mid ah kuwa yar, taas oo ay uga mahadcelinayaan dareenkooda jidhkooda, waa wax soo saaraha hilibka lo'da.
Wax soo saarka wanaagsan ee noocan oo kale ah ayaa waxaa dhaxlay ilmo yar oo ka yimid labo nooc oo Ingiriis ah oo kale oo ah sifooyinka soo socda:
Aberdeen Neef, faa'iidada ugu weyn ee taas oo ah dhisme aad u xoogan iyo koboc dhaqso ah ee xayawaanka yaryar. Kuwani waa lo'da nooca hilibka gaarka ah, taas oo dhaxashay naasaha na sharaxay.
Angus lo'da waaweyn, oo ah mid ka mid ah kuwa ugu weyn marka la eego cabbirka jirka. Intaa ka sokow, lo'da Angus ayaa loo tixgeliyaa kuwa ugu caansan, laakiin dabeecadani ma aha mid la kala qaado Aberdeen-Angus.
Qeexida xuduudaha iyo shuruudaha kale ee Aberdeen Angus lo'da
Tilmaamaha ugu horreeya ee muuqaalka muuqaalka ah ee noocaan ah waa in ay ka mid tahay noocyada lo'da. Tani waxay ka dhigan tahay in xayawaankuba lab iyo dheddig yihiin, ha haysanin geeso. Tani waxay abuureysaa duur si aad u adag ujeeda, si kastaba ha ahaatee, waxay ka ciyaareysaa gabi ahaanba doorka guriga.
Calaamadda labaad ee aad adigu kala soocayso caleenta lo'da Aberdeen-Angus waa midkood, inta badan lagu soo bandhigay madow. Si kastaba ha noqotee, wakiillada habdhiska casaanka ayaa badanaa laga helaa, taas oo aan calaamad u aheyn Beelaha ama ka sii daridda sifooyinka xayawaanka.
Asal ahaan, lo'dooyinkani waxay leeyihiin kuwan soo socda muuqaalada muuqaalka jirka:
Madaxa wakiilada caleemaha, inkastoo culus, waa yar yahay. Madaarka ayaa soo baxa wax yar, horeyna madaxa waa cidhiidhi. Maqaarka waa gaaban yahay.
Lugahooda waa muruqyo, taas oo la ogaan karo xitaa indhaha qaawan, sidaas darteed fareemo. In dhererkoodu waa gaaban yahay, laakiin xoog leh oo si sax ah loo dhigay.
Jidhku waa mid aad u ballaaran, qoto dheer oo culus, sidaas darteed lugaha qaansarradan waa inay qaadaan culays aad u culus. Qeybta sare ee jirka ah ee taranka ayaa ku dhowaad dhammaystiran.
Qoorta waa mid aan la arki karin, sababtoo ah madaxa ayaa si deg deg ah ula jeeda garbaha.
Si aad u wanaagsan oo ka mid ah wakiilada laf dhabarta iyo iskutallaabta. Lugaha ayaa wareegsan, muruqyadooda si wanaagsan ayaa loo horumariyaa waxayna lugaha lugta ku dhajiyaan xabad.
Sababtoo ah joogitaanka sifooyinka kor ku xusan, oo leh quudin wanaagsan, lo'da waxay helayaan qaababka wareegsan kuwaas oo si cajiib leh leh muruqooda.
Sababtoo ah maqaarka xoolahan quruxsan, aad u adag iyo dhuuban, murqaha ayaa si muuqata u muuqda.
Waxaa habboon in la ogaado in laf-dhabarka xayawaanka uu yahay mid khafiif ah, sidaas darteed miisaankiisu waa marka la eego culeyska bakhtigu dhan dhan wuxuu noqon karaa 15 ilaa 18%.
Iyada oo xuduudaha kale ee jirka, lo'da Aberdeen-Angus ayaa ka sii daray:
Heerka qaangaarka ee qaangaarka ku jira wuxuu u dhexeeyaa 120 ilaa 150 sentimitir (bullshadu waxay ku badan yihiin cabbirka, markaa way badan yihiin).
Xajinta laabta waxay noqon kartaa 45-65 websaydh.
Maklokah ballaaran torso ayaa u dhaxaysa 50 illaa 60 sentimitir.
Laga soo bilaabo 135 ilaa 140 sentimitir celcelis ahaan waxay ku kala duwanaan kartaa dhererka jidhka ee lo'da.
Laga soo bilaabo qalabka kor ku xusan waxay raacaysaa in aan ka hadleyno xayawaan aad u ballaaran. Laakiin waxaas oo dhan, dabeecadooda, waxay yihiin kuwo caqli-gal ah, ma xitaa muujinayaan calaamadaha gardarrada (marka laga reebo digaagga muddada baaluqnimada).
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee Aberdeen-Angus jilicsan
Tan iyo qiimaha ugu muhiimsan ee lo'daas waa hilibkooda, yoolka ugu weyn ee waxsoosaarka lo'du waa inuu si dhakhso ah u koraan hilibkan.
Marka laga hadlayo nooca la soo tarjumay, ma aha wax qiimo leh oo ku saabsan arrintan gaar ahaan, sababtoo ah ma aha oo kaliya si fiican u quudiya, laakiin si dhakhso ah ayuu u sameeyaa. Faa'iidada nooca noocan oo kale ah ayaa shaki ku jiraa qaab dhismeedka habka dheef-shiidka ee xayawaanka iyo habka ay ku jirto unugyada dufanka leh.
Xaqiiqdu waxay tahay in dufanka aan loo kaydin si gooni ah hilibka, taas oo ka dhalatay dufanka oo dhan "Klondike" waa la sameyn karaa.
Aberdeen Cawska Angus lakabyada dufanka leh ayaa lagu sameeyaa habka saxarada ee muruqyada, natiijada, iyo waxa soo baxday hilibka marble caan ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan hilibka iyo sifooyinka uruurinta ayaa lagu sifeyn doonaa hoos.
Waxaa muhiim ah in lo'da ee caanahan ay awoodaan in ay yeeshaan korodh wanaagsan xataa xitaa maqnaansho kale oo quudin, marka laga reebo cawska cagaaran ee daaqa. Caado u ah duurjoogta, lo'da Aberdeen-Angus xitaa ku quudin karaa caleemo geed. Cuntada aasaasiga ah ee da 'yarta ayaa si dabiici ah u sameysa caanaha hooyada.
The mudnaanta weyn ee been abuur ah ee la tilmaamay ayaa xaqiiqda ah in gen ee uu gudbin karaa tayada hilibka. Intaa waxaa dheer, marka la soo dhaafo iyaga, ma aha oo kaliya tirada laakiin sidoo kale tayada hilibka keena kor u kaca.
Sidoo kale, markaad ka soo gudubto noocyo kale oo farabadan oo carruurtooda ah, lo'da Aberdeen-Angus waxay soo saartaa xuub-celin (awood-siinta si deg-deg ah u joojiso koritaanka jidhka oo bilaabaan inay si firfircoon uga faa'iidaystaan ​​miisaankooda, iyo sidoo kale xilli hore si ay u galaan qaan-gaarnimada). Marka la eego, taranka ayaa si aad ah loogu isticmaalaa taranta.
Waa maxay waxyaabaha muhiimka ah ee laga rabo in la ogaado ka hor intaan iibsan?
Waxaan qabaa, isagoo akhrinaya macluumaadka ku saabsan asalka dhalashada, qaar badan oo isla markiiba ka shakisan yahay in lagu hayn karo dhulka dalka. Su'aashu waa mid caqli-gal ah, laakiin isla markiiba waxaan u degdegnaa si aan kuugu wargalinno in lo'dadani si fiican ugu habboon jawiga Russia, Ukraine iyo Belarus.
In kasta oo xaqiiqda ah in dhalashada Aberdeen Angus soo saarto cimilada qabow ee leh roobab aad u daran, waxay la qabsan karaan wadamada kulul.
Dabcan, tani macnaheedu maaha inay si dhakhso ah loogu wareejin karo subtropics iyo helitaanka wax soo saar wanaagsan. Waxaa laga yaabaa inaad sugto jiil cusub ka hor inta aanad buuxin. Inkastoo, ikhtiyaarka aadka u wanaagsan uu noqon doono in si fudud loo iibsado xayawaanka horey loogu qaabeeyey xaaladahaaga.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan wax muhiim ah jawiga aad ku dhali doonto lo'da kuwan, si kasta Looma baahna in daboolo. Ka dib oo dhan, faa'iido kale oo ka mid ah taranka waa awood u leh inay si fudud u dulqaado xitaa heerkulka hawada kulul xoog leh.
Door weyn oo ka mid ah awooda xayawaankan ayaa shaki la'aan ku ciyaaray jaakad qaro leh ee lo'da, iyo sidoo kale nidaam difaaca oo wanaagsan. Cabbirka weyn iyo joogitaanka tiro badan oo lakabyo leh ayaa sidoo kale diiriya xayawaanka xilliga qaboobaha.
Si ka duwan noocyada kale ee hilibka hilibka kale ee lo'da loogu talagalay baaxada lacag la'aanta ah ee daaqsinka, lo'da Aberdeen-Angus waxay sidoo kale u taagan tahay nooc isku-darka ah ee wax-soo-saarka.
Qodobkani waa in lo'da caanahan ay sidoo kale awood u leeyihiin inay soo saaraan caanaha, inkasta oo ay xushmeynayaan ay aad uga hooseyso waxqabadka naasaha kale. Cuntada caanuhu waa mid aad u hooseeya, hal sanona waxay noqon kartaa oo kaliya 1300-1700 oo kiilo (iyada oo aan la tixgelineynin muddada cuntada quudinta).
In kastoo muruqyada lugaha ee lo'da ayaa aad u horumarsanMarka loo eego qaybta jirka ee ugu muhiimsan, waxay weli ku jiraan daciif. Sidaa darteed, leh cayilka xad dhaafka ah, xayawaanka ayaa jebin kara lugahooda, ama si fudud u dhaco iyaga.
Sababtoo ah tani waa muuqaal ah in Aberdeen Angus lo'da laguma talineynin naas nuujinta. Ka dib markii dhan, haddii cayayaanka loo oggolaado in lagu gowraco da 'yar, xitaa daciifnimada lugaha ma faragelin doonto tan, ka dibna lo'da ma noqon karaan mid cayilan xaalad kasta.
Waxay si gaar ah ugu adagtahay xayawaanka dumarka ah inay culeyskooda saaraan muddada uurka, dhalmada sidoo kale waxay ku dhici kartaa dhibaatooyin.
Muuqaalka guga iyo soo jiidashada ee taranka ayaa sidoo kale qarxinaya dhabarka dhabta ah ee xayawaanka iyo madax weyn oo culus. Hase yeeshee, dhinaca kale, qaababka dastuurka jirka waxay u oggolaaneysaa xayawaanka in ay si wacan ula qabsadaan xaaladaha kala duwan ee deegaanka.
Dhibaatada naas-nuujinta iyo ilaalinta caleemaha qeexan waxaa ka mid ah baahida loo qabo daaqsiyada waaweyn. Waxay ku habboon yihiin beerashada, ama taranta beeraha.
Noocyada wax soo saarka cunnida kaydka hilibka
Waxaan ugu yeeray kooxda hiddaha ah ee caanahan sabab wanaagsan, sababtoo ah waxay si dhab ah u qabsadeen meesha ugu horeysa ee sifooyinka iyo sifooyinka hilibka. Dadka qaangaarka ah ee horeyba uqaabilaa waxay awoodaan in ay gaaraan indices tiro badan:
Miisaanka lo'da way kala duwanaan kartaa ilaa 500 ilaa 550 kiilo.
Bulls ayaa si fudud u kordha miisaanka 750 illaa 950 kiiloogaraam.
Bullska waxaa badanaa loogu diraa in lagu gowraco da 'yar si loo ilaaliyo jilicsanaanta iyo jilicsanaanta hilibka. Best for xayawaankan ku haboon inta u dhaxaysa da'da 1.5 ilaa 2 sano. Si kastaba ha noqotee, waxaa la ogaaday in kastoo da'da xayawaanka, hilibka uu noqdo mid adag, wuxuu ku darayaa xaddiga kale.
Takhaatiirta khibrad leh ee dhadhamiya hilibka ayaa awood u leh inay go'aamiyaan da'da xoolaha laga helay. Isla mar ahaantaana, wax soo saarka ka yimid bakhtigu waa qiyaastii 60% hilib saafi ah. Dhammaan sifooyinkaa noo ogolaanaya in aan tixgelino waxqabadka ilbaaxadu waa mid aad u sareysa.
Isku xirnaanta taranka dib-u-dhalashada
Geedka ugu horeeya ee lo'da Aberdeen-Angus ayaa laga yaabaa in laga bilaabo 14-16 bilood, dhalmada waxay dhici kartaa sannad kasta. Waxay badanaaba dhacdaa in hal dhalmo ah lo'da soo saartaa laba godood oo adduunka ah hal mar.
In kasta oo xaqiiqda ah in lo'da lagu hayo furan, dhimashada shahaadada dhalinyarada waa mid aad u yar. Tani waxay fududeyneysaa oo keliya ma'aha daryeelka hooyada, laakiin sidoo kale difaac adag.
Xitaa miisaanka ilmaha caloosha ku jiraa wuxuu noqon karaa 16 ilaa 28 kiiloogaraam. Isla mar ahaantaana, dhammaan lo'daha jidhkooda ka tagay waxay muujinayaan niyadjabkooda hooyada si aad u wanaagsan waxayna si madax banaan u madaxbannaan quudinta caanahooda ilaa da'da 8 bilood.
Isla mar ahaantaana, muddada quudinta oo si gaar ah loogu quudiyo caanaha, weylaha waxay helayaan 180 kg, inkastoo guud ahaan, waqtiga maqnaanshaha hooyada, miisaankoodu caadi ahaan wuxuu gaarayaa 230 kiilo.
Arrintani waxay sidoo kale ka ciyaareysaa kaalin muhiim ah oo ku saabsan quudinta dhallinta, taasoo ka dhigeysa koritaanka dhaqso badan. Marka la siinayo da 'yar oo aan ahayn caanaha oo keliya, laakiin sidoo kale leh saldhig shimbireed oo wanaagsan oo ah qaabab badan oo cawska cagaaran, celceliska celceliska maalin walba wuxuu noqon karaa 700 ilaa 800 grams.
Dhab ahaan ka dib marka la gooyo caloosha hooyada, kharashka quudinta ee helitaanka 1 kiilo oo faa'iido ah waa 6,5 ​​oo qaybood oo quudin ah, taas oo ah tusayaal aad u hooseeya ee lo'da.
Sida loo kobciyo hilibka ugu fiican ee marbled: Talooyin ku saabsan haynta iyo quudinta Lo'da Aberdeen-Angus
Sidii horaanba loo soo sheegey, qaabka gaarka ah ee lo'da ee Aberdeen-Angus waa in baruurtoodu aysan ku jirin maqaarka hoostiisa, laakiin u dhexeeya murqaha muruqyada. On gooyaa, hilibka noocan oo kale ah u eg sida marble cas, oo laga helay magaceeda. Isla mar ahaantaana, dufanku ma saameynayo tayada hilibka, laakiin liddi ku ah - waxay ka dhigeysaa mid run ah.
Waad ku mahadsan tahay lakabyada dufanka, hilibka lo'du wuxuu noqonayaa mid kaliya oo jilicsan, laakiin sidoo kale nadiifiye badan, sidaas darteed helitaanka tayada dhadhan gaar ah.
Hilibka ee lo'da Aberdeen-Angus sidoo kale waxaa lagu talinayaa in lagu adkeeyo Bisaylkiisa, ama da'da. Si arrintan loo sameeyo, waxaa loo diraa qolal qaas ah oo aan lahayn wax qabad, halkaasoo heerkulka la dhigo qashinka lagu yareeyo hilibka.
Hannaankan fudud, hilibka ma aha oo kaliya inuu helo dhadhan cusub, laakiin sidoo kale wuxuu noqonayaa mid xitaa jilicsan. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in unugyada isku xira ee saameyn ku leh enzymes (catalysts protein) ay hoos u dhacdey, oo kor u qaada dhadhanka lo'da gaarka ah.
Sharaxaadda shuruudaha lagama maarmaanka u ah mawduuca iyo quudinta
Si kor loogu qaado hilibka noocan oo kale ah ma aha mid lagama maarmaan ah, ama ma aha in la wada isticmaalo, si aad u isticmaasho dufnado kala duwan oo loogu talagalay naaxinta. Saldhigga dabiiciga ah ee daaqa ee dabiiciga ah wuxuu noqon doonaa cuntada ugu fiican uguna nafaqada badan ee loogu talagalay wakiilada taranka.
Iyadoo taasi, xayiraadaha kala duwan ee Aberdeen-Angus waxaa lagu hayaa sanadka oo dhan. Cunto dheeraad ah oo ay u baahan yihiin in ay bixiyaan kaliya xilliyada jiilaalka, marka dhulka la daboolo barafka iyo xayawaankaba ma awoodaan inay si madax bannaan u soo saaraan cuntadooda.
Aad bay u fiicantahay haddii xayawaanka dabiiciga ah iyo xayawaanka kaynta iyo sidoo kale meydka biyaha ay ku yaallaan wareegga daaqa. Xaaladdan oo kale, xayawaanka gabi ahaanba kormeer la'aan ayaa loo baahan yahay iyo daryeel dheeraad ah.
Laakiin tani ma aha faa'iidada keliya ee habka loo ilaaliyo: waxaa la rumaysan yahay in haynta dabiiciga ah ee lo'da ee taranka la tilmaamay, dhadhanka hilibkoodu wuxuu noqonayaa mid khafiif ah iyo sahamin badan.
Xayawaankee ayaa ah kuwa ugu fiican ee hilibka marmarka ah?
Si aad u hesho hilibka marble tayo sare leh, beeralayda dalal badan oo yurub ah si gaar ah bay u koraan qashin. Si kastaba ha ahaatee, dalka hooyo ee Ireland iyo Ireland, hilibka ee weylahaas, kuwaas oo la caleentay da'da weylaha, waxaa loo tixgeliyaa in ka badan oo la safeeyey.
Dumarka dibedda ah waxaa loogu yeedhaa dibedda, waana hilibkooda loo arko inay ugu fiican yihiin dhadhanka.
Xaqiiqdu waxay tahay in xuubka murqaha ee xayawaanka noocan oo kale ah uu ka khafiifsan yahay dibi caadi ah, kaas oo siinaya hilibka dhadhan tayo sare leh. Intaa waxaa dheer, dayactirka ee dibedda ayaa u oggolaanaya in ay la socdaan oo ay la socdaan lo'da oo aysan ku qasbin milkiilayaasha in ay raadiyaan daaqsinka shakhsi ahaaneed.